ယောဟန်အောင်: မင်းအလိုကျ ဘာမဆို (လိုဆို)
မင်းအလိုကျ ဘာမဆို (လိုဆို)
လိုဆိုရဲ့ ဒီသီချင်းကလည်း အတော်လူကြိုက်များပါတယ်။ ထိုင်းစကား နားမလည်သူတွေတောင် နှစ်သက်မိကြတဲ့ သီချင်းပါ။ ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒီသီချင်းကိုပဲ အဆိုတော် "ဆင်ပေါက်" က မြန်မာလို ပြန်ဆိုထားတာ တွေ့ရတယ်။
လိုဆိုရဲ့ သီချင်းတွေကို မြန်မာလို ပြန်ဆိုထားကြတာ ရှိမှန်းမသိရဘူး။ ကော့သောင်း ဘလော့မှာ ကြည့်မိတော့မှ သီချင်း တော်တော်များများကို မြန်မာလို ဆိုထားတာ တွေ့ရတယ်။ ကိုသာထူးရဲ့ ကော့သောင်းဘလော့ဆိုက်ကို ဒီနေရာမှာ သွားပြီး သီချင်းတွေ ခံစားနိုင်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ် လင့်ခ် ဒီမှာပါ။
မင်းအလိုကျ ဘာမဆို (လိုဆို) a-rai gor yorm
မညာပါနဲ့ကွယ်၊ ဒီလို မလုပ်ပါနဲ့
ငါ့ကို လှည့်ဖျားလို့ ဘာရမှာလဲကွယ်...
သူကပဲ အကျေနပ်ဆုံး စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်
ခုလို မင်းငါ့ကို လှည့်စားနေတာက
သို့ပေမယ့် ငါ့နှလုံးသားထဲမှာ ကြိုသိထားခဲ့။
မင်းနဲ့ အတူ ထာဝရ ရှိနေဖို့ပါပဲ။
ဘယ်သူ့ကိုမှ မပေးခဲ့တဲ့ အရာမျိုး
အလိုကျ ငါက အားလုံးကို ပေးလိုက်ဖို့လည်း အသင့်ရှိနေပါတယ်။
မင်း အလိုကျ ဘာမဆို ပေးမယ်။
ဒီလို လုပ်တာလဲ မကောင်းပါဘူး။ မလုပ်ပါနဲ့။
ငါက သိပေမယ့် ချစ်လို့ သည်းခံနေခဲ့တာပါ။
ချစ်ရက်နဲ့ သည်းခံခဲ့ရ လွန်လှပါပြီ
မင်း ငါနဲ့ အတူရှိနေဖို့ပါပဲ။
အားလုံးကို အလိုကျ ငါက ပေးဖို့လည်း အသင့်ရှိနေပါတယ်။
a-rai gor yorm
yaa goh hok chan yaa tam yaang nan
Don't lie to me, don't do it.
lok luang gan ter nan ja daai a-rai
What would you gain by deceiving me.
meua ter mee kao yoo dtem hua jai
If he's the only one in your heart.
อย่าทำร้าย ด้วยการที่เธอ ทำเป็นว่ารักกัน
yaa tam raai duay gaan tee ter tam bpen waa rak gan
Don't hurt me even more by pretending you still love me.
sing tee ter tam man roon raeng glaeng rak hai jai chan jep
What you've done has been so cruel. Acting as if you love me, and causing me pain.
gep maa naan yoo nai hua jai chan roo teung ter ja bpit
Which I've kept it in my heart for so long. I know what's happening, even though you haven't told me.
ที่ยอมให้เธอ หลอกกันเรื่อยมา เพราะฉันทำใจไม่ได้
tee yom hai ter lok gan reuay maa pror chan tam jai mai daai
But the reason I let it carry on, let you carry on lying to me is because I still can't accept it.
tee ja yom hai ter jaak bpai bpen kong kao jing jing
can't accept you leaving me to be with him.
ฉันเพียงต้องการ ให้เธอ อยู่กับฉันตรงนี้ นานนาน
chan piang dtong gaan hai ter yoo gap chan dtrong nee naan naan
All I want is for you to remain here with me.
ฉันเพียงต้องการ ให้เธอ อยู่กับฉัน ตรงนี้เรื่อยไป
chan piang dtong gaan hai ter yoo gap chan dtrong nee reuay bpai
All I want is for you to be here forever more.
tee chan yom took sing reuang jing mai koie yom krai
And the reason I'm letting you have everything, even though I've never done this for anyone before.
ก็เพราะรัก เธอทั้งหัวใจ อะไรก็ยอมเธอ
gor pror rak ter tang hua jai a-rai gor yom ter
Because I love you with all my heart and I'd give you anything you want.
mai dee rok naa tee tam yaang nee
It's not right, for it to be like this.
chan roo dee dtae rak jeung dtong jam ton
I know it, but as I love you I have to put up with it.
hai ter mee kao kon nan tang kon
To let you have him.
ที่อดทน เพราะรักตัวเธอ นั้นมากมาย
tee ot ton pror rak dtua ter nan maak maai
I have to endure it as I love you so much.
But the reason I let it carry on, let you carry on lying to me is because I still can't accept it
tee chan yom took sing tang tee jing mai koie yom krai